Pink pink "Bonika 82": foto, nkọwa, kwesịrị ekwesị, na-elekọta - Mkpụrụ ubi - 2020
Mkpụrụ pink "Bonika" n'ogige
Pink bilie "Bonika 82" natara ndụ na 1981 ekele na breeder Meiyan na ebe ọ bụ na-aghọkarị ihe na-emekarị na-eji na-emepụta nke ala.
O meriri udiri anya dika oganihu ngwa ngwa ya, tinyere otutu okooko osisi.
Ịhọrọ saịtị ọdịda
Nchebe megide ọrịa na pests
Ọ bụrụ na i jiri ọtụtụ okwu kọwaa osisi, ị nwere ike ịsị: "Bonika" - Ama ama ama adaha, emi mîdịghe emetụta ọrịa na pests. Mana nye ya nke a ezughị, ya mere tụlee foto na àgwà nke ifuru nke meriri ụwa.
Osisi dị ukwuu, nke na-agbapụta elu, ruru mita 2 - ọ na-adabere n'ọnọdụ ihu igwe ebe a kụrụ ya. Na-ele anya mgbe mmiri gachara kwachaa, mgbe alaka ya belata site na ọkara nke ogologo.
Na brushes nke pink buds (nwere ike ruo na 15 iberibe na otu ahịhịa) okooko osisi pink na-ekpughe na dayameta ruo 8 centimeters ọ bụla, nke na ihu igwe na-acha ọcha na-acha ọcha. Okooko a na-eme ka nnukwu efere, ya na petals. A na-eji okooko osisi eme ihe maka igbutu, ha na-anọ na vases ruo ogologo oge.
Oge nke okooko osisi "Bonika" dị ogologo - site na mmalite nke ọkọchị ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ ga-eme ka ị fụchaa okooko ya. Ma okooko osisi kachasị ogologo na ogologo - nke mbụ.
A ghaghị egbutu okooko osisi a ghachapụrụ, n'ihi na ha na-amịpụta ọtụtụ mkpụrụ nke agba ọbara uhie na-acha ọbara ọbara, nke na-anọgide na osisi ahụ ruo mgbe mmiri. A na-eji atụmatụ a na nhazi ihuenyo.
Akwukwo na osisi di iche iche bu akpụkpọ anụ, nwere ọgaranya agba agba na agba odo na isi.
Dabere na mmiri ahụ kwachaa, ị nwere ike ịmepụta osisi dị ka ihe mkpuchi ala ma ọ bụ shrub.
Rose bụ na-eguzogide oyi, maka ebe nchekwa maka oyi, a na-eli akụkụ ala nke ohia ahụ.
E nwere ike iji ya mee ihe na mpaghara osisi, dịka onye na-akụ ihe, ọbụnakwa n'ime ihe - dị ka akwa akwa akwa.
Ị ma? N'afọ 1982, na Germany, maka ọtụtụ okooko osisi ya na ezi nguzogide ọrịa ya, ụdị "Bonika 82" dị iche iche nyere onyinye German - ADR. N'afọ 2003, a kpọbatara ifuru ahụ n'ime ụlọ nzukọ nke World Federation nke Rose Rose Society, dị ka "ihe kachasị amasị ụwa."
Ezigbo Roses na-eji ezigbo ntachi obi, ogologo oge okooko osisi, ọ na-eguzogide oyi. A ghaghị ịtụle atụmatụ ndị a dị na mgbe ị na-ahọrọ saịtị na-ebute.
Maka okooko osisi di ogologo na nke siri ike osisi choro ka ìhè anyanwu. Osisi ahụ ga-agbaju na penumbra, ma ọ gaghị adị ogologo oge na oke ọnụọgụgụ dị ka anyanwụ. A ga-akụkwa "Boniku" ebe ndị a na-enweghị ebe ọ na-enweghị ikuku.
Ọ dị mkpa! Ịgha mkpụrụ dị iche iche na ebe ikuku na-ekpo ọkụ na, n'ihi ya, na iru mmiri dị elu na-eduga ná nhazi nke oji ojii na epupụta, nke nke ya na-emetụtakwa mma osisi ahụ.
Ebe ọ bụ na rose bụ ihe dị mma, na mgbọrọgwụ ya na-abanye n'ime ala, ya mere, nkwadebe nke ala maka akuku kwesịrị ime nke ọma - ọbụlagodi otu ọnwa tupu akuku. Isi ihe:
na ala dị ọkụ, enwechaghị acidity;
ala ahụ na-eme nri kwesịrị ịdịkarịa ala 60 sentimita;
ezigbo ala maka akuku Roses bụ loam;
ọ bụrụ na ụrọ dị ọtụtụ n'ime ala, ọ dị mkpa ịgbakwunye ájá, nke na-eme ka ala dịkwuo ọkụ na ume;
a ghaghị itinye mkpụrụ akụkụ doro anya na ájá ájá;
ala mmiri na-adabaghị adaba maka ịgha mkpụrụ Roses. Site na-agbanwe agbanwe ya site n'inye ájá, ụrọ, wayo na turf, ị nwekwara ike akụ na-eto eto ọma rose bushes.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere ịkụ mkpụrụ na ụdị Roses David Austin ("Falstaff", "Thomas Thomas", "Abraham Derby", "Mary Rose", "William Shakespeare").
Ọganihu na ornamental ọdịdị nke osisi na-adabere otú na otú seedling ga-kụrụ.
Mma nke ohia ohia na-adabere n'oru ihe akuku ihe. Osisi siri ike anaghị achọ mgbalị dị ukwuu na nlekọta. Enwere ike ịzụta ụdị dị iche iche:
Akwụsị ọtọ - a na-enweta ihe dị otú ahụ na-akụ ihe n'oge akuku - na ọdịda ma ọ bụ mmiri. Ọ bụrụ na seedling bụ nke kasị elu, mgbe ahụ, ọ nwere atọ ị ga, ka n'etiti etiti nwere abụọ ị ga. Akara nke mgbọrọgwụ n'olu ruo 10 centimeters. Mgbọrọgwụ kwesịrị ịdị mma na nke ọma, mejupụtara ya na mgbochi mmiri.
Mgbọrọgwụ jupụtara na ala, ọbọp akwụkwọ ma ọ bụ ọbọp plastik ka ha wee ghara ihichapụ.
Bushes n'ime ihe ntanetị - ị nwere ike kụrụ n'oge ọ bụla. Nke a bụ nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya, ebe ị nwere ike inyocha ọdịdị na agba nke ifuru. Mgbe ị na-ekpuchi elu ala na-asọ oyi ma na-ebute olulu kwesịrị ịbụ otu.
Na-agụkwa banyere ihe ndị dị na nsị nke ihe ubi, na-arị elu ma na-acha na Roses.
Okpokoro pink rose bushes dị mma kụrụ ma na otu na naanị, na anya n'etiti plantings dị mkpa maka ha n'ihu mmepe. Ọ dabere na nhazi nke oke ohia n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na akuku dị oke - enwere ihe ize ndụ nke ọrịa fungal, obere - ụwa na-ekpuchi anyanwụ, na ahịhịa na-eto. A na-eme ihe dị iche iche na Roses dịka atụmatụ nke 70h95 centimeters, ma ọ bụrụ na a na-akụ osisi ndị ahụ n'ahịrị, mgbe ahụ debe ihe dị ka centimetim 65 n'etiti ha. Mgbe ị na-akụ gị mkpa ịkwado atụmatụ ụfọdụ:
Ụbọchị ole na ole tupu akuku, kwuo olulu 60x60x60 centimeters, jupụta na mmiri nke mere na ụwa dị mma. Ugo nke olulu mmiri na-adabere na usoro mgbọrọgwụ nke seedling - ha ga-ahụ kpamkpam, na-enweghị kinks.
Kwadebe ala maka akuku. Iji mee nke a, jikọta ala na compost na peat na nha nha, wee tinye fatịlaịza a kwadebere maka fatịlaịza, nke a na-ere n'ime ụlọ ahịa.
Wunye akwa akwa mmiri, ma n'elu ala a kwadebere na-atọpụ ala. Ọ bụrụ na ala bụ ájá - mmiri adịghị mkpa.
Ejiri nlezianya nyochaa mkpụrụ osisi ndị nwere mgbọrọgwụ, gbanyụọ mgbọrọgwụ ndị ahụ mebiri emebi, belata ogologo oge, na-ahapụ ogologo karịa 30 centimeters. Ọ bụrụ na osisi dị n'ime akpa, jiri nlezianya wepụ ya site n'ala ka mgbọrọgwụ ghara mebie. Hapụ ihe karịrị 3 ike Ome ma belata ha nke mere na ọ dịghị ihe karịrị 3 ezigbo buds na azuokokoosisi.
Kwadebe ohia wee banye n'ime oghere n'elu mgbidi, gbasaa mkpọrọgwụ ma kpuchie ụwa. N'okwu a, a ghaghị iji nwayọọ nwayọọ kpoo ala ahụ, ma n'otu oge ahụ a ga-ewepụ ohia ahụ ka e wee ghara ịhapụ ya. Dọọ akwa ala maka ịgbara mmiri.
Osisi a kụrụ nke ọma na-agbanye mmiri ka mgbọrọgwụ jupụta na mmiri, ma jupụta na ihe ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa! A na-akụlite rose dị ka iwu si dị mgbe saịtị ịgba ọgwụ mgbochi dị n'okpuru ala na omimi nke 5 sentimita. Ọ bụrụ na a na-enweta mkpụrụ osisi site na cuttings na-enweghị ogwu, ị nwere ike ịkụnyekwukwuo onwe gị nyekwuo mgbọrọgwụ.
Ọ bụrụ na ị họọrọ ebe kwesịrị ekwesị maka ịkụ ihe, ị kwadebere ala maka rose nke ọma - mgbe ahụ, nlekọta nke dịgasị iche iche "Bonik 82" na-agụnye ịgbara mmiri na nri n'oge.
Roses bụ mmiri na-ahụ n'anya, ha dịkwa mkpa ịgbara mmiri.
Na-agụkwa banyere ụdị Roses: "Grand Gala", "Abracadabra", "Kerio", "New Dawn", "Chopin", "Fụfụ Ucha", "Abụọ Ụtọ", "Pink Intuishn", "Sophia Loren", "Pierre de Ronsard, Jubilee Prince de Monaco, Gloria Dey, otu ìgwè Cordes na ogige ntụrụndụ.
Mana mkpa nke mmiri na-adabere n'òtù na-eto eto:
oge oge ntoju buds, akwukwo, nakwa oge mgbe okooko osisi nke kachasị mkpa ga-achọ nnukwu mmiri, n'ihi na n'oge a na-eri nri, mmiri bụkwa onye na-eduzi nri na ala. Ọ ga-edozi ma nwee okpomọkụ okpomọkụ. Atọ kwesịrị ịbụ otu ugboro n'izu n'iji bọket 10-liter n'okpuru ohia. Ọ bụrụ na ihu igwe dị ọkụ, arụ ọrụ kwesịrị ime ugboro abụọ n'izu. Mmiri kwesịrị iji nlezianya wụsara n'okpuru ohia, ọ bụghị ịda na epupụta. Ka mmiri wee banye n'okpuru osisi ahụ, mgbe ị na-emeghe Roses site na ndo oyi, ịkwesịrị ịmepụta ebe a na-egwupụta ụrọ nke dị gburugburu ohia, mgbe ahụ mmiri ahụ agaghị asọba n'akụkụ. Oge kacha mma iji jupụta mmiri na mmiri bụ ụtụtụ, ruo awa 10;
na Septemba, n'oge mmiri ozuzo, ọ dịghị mkpa ka mmiri mee ka osisi ahụ nwee ike, ka ọ ghara ịkwalite uto nke Ome Ome. Ọ bụrụ na ụbịa bụ ọkọchị, atọ dị mkpa otu ugboro n'izu - wunye ruo 5 lita mmiri n'okpuru ohia;
Tupu ebe obibi oyi ị kwesịrị ime ihe dị ka mmiri atọ n'okpuru otu osisi.
Ọ dị mkpa! Mgbe ọ bụla atọ, ọ dị mkpa ịtọghe ala n'okpuru ohia ka ụwa ghara ịmịpụta, mechie ohere nke ikuku oxygen na mgbọrọgwụ. Kama ịtọhapụ gị, i nwere ike iji ala na-eme nri n'okpuru bushes site n'enyemaka nke okwu ahụ.
Maka ọdịdị ọdịdị na ezi mmepe, osisi chọrọ nri edozi, ha ga-enwetakwa ha n'oge.
Dị ka ejiji eji:
Nri nri - nri, nri anu anu, compost - mere ka ha gbakwunye n'ala. Ọ na - ewe oge iji hazie ha, na oge opupu ihe ubi, ndị na - eto osisi mgbe oyi ga - ebido ga - amalite inweta ihe oriri. Nke abụọ organic mgbakwasa na rụrụ mgbe Roses oge ntoju;
Nri nke mineral juru ebe nile, ha na-azutu ya site na osisi ruo ọnwa 3, a na-emepụta ha na mmiri n'oge mbido April, mgbe bushes malitere ịmalite. Ná ngwụsị oge ọkọchị, ọ dị mkpa iji zụọ ndị Roses na nri nri maka ịka nká nke Ome na ezigbo oyi.
Anyị na-enye gị ndụmọdụ ka ị gụọ banyere atụmatụ nke ịkụ nke tii, Dutch, Canada Roses.
"Bonike", dị ka ihe niile Roses, mgbe mwepụ nke oyi ndo dị mkpa sanitary kwachaa. Ewepu ahihia, gbajiri ma na-eto n'ime alaka ohia. Na-adabere na ihe mgbaru ọsọ e ji achọ mma - a na-eme ụdịchaa ahụ. Ebe ọ bụ na rose "Bonika" na-ezo aka n'ụgbọ nke Floribunda, a na-egbutu alaka ochie ahụ, a na-egbukwa ndị na-eto eto ruo otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ogologo.
"Bonika" na-eguzogide ọrịa na pests. Site na njedebe nke oge okpomọkụ ma ọ bụ na oge okpomọkụ n'oge ọkọchị, oghere ojii nwere ike ịpụta n'elu akwụkwọ. Ha anaghị egbochi okooko osisi, kama ha na-emebi ọdịdị ahụ. Ọ bụrụ na etuto ahụ apụta, mgbe ahụ, a ga-agbajiri akwụkwọ ahụ ma kpọọ ọkụ ozugbo, nke mere na nsị adịghị amalite ịgbasa na osisi ndị ọzọ. Ọzọkwa, ịlụso nsogbu a ọgụ, ị ghaghị iwepụ alaka ndị dị mkpa na-eme ka osisi ahụ ghara ịdị na-ewepu. Gburugburu Roses n'ime ala ọ dị mkpa ịgbakwunye osisi ash maka igbochi ọrịa. Isi nri "Boniki" - aphid. A ghaghị ịsaa ohia ahụ mmiri ma mee ya ihe ngwọta nke nchacha mmiri na mmanya.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị na-akụ lavender bushes na-esote rose a dịgasị iche iche, ọ ga-abụ ọ bụghị naanị na-adọrọ mmasị na Nchikota agba, ma fragrant ahịhịa ga-mmenyenjo pụọ aphids.
Mgbe ị mụtara ihe niile banyere "Bonika 82" dị iche iche, ị nwere ike ịgha mkpụrụ a dị ebube na ibé ahụ, na nlekọta kwesịrị ekwesị, ịma mma mara mma ga-atọ gị ụtọ na oge ntoju ya.